... त्यसपछि कलाकार निर शाह चुरोट छाडेर लागे योग–ध्यानतिर
बुढानिलकण्ठमा निर शाहको घर छ । शान्त वातावरणमा सजिएको २ तले आकर्षक घरभित्र निरको छुट्टै अफिस छ, जहाँ उनले दर्जनौं सम्मानपत्र, अवार्ड, पुरस्कारलाई निकै सुरक्षित तरिकाले राखेका छन् ।
आकर्षक घरभित्रको त्यो सानो अफिस पसेपछि जो कसैले उनको कामको कदर गर्छ, सम्मान गर्छ, एकाएक निरप्रति शिर उचो बन्छ ।
‘मैले कतिपटक सम्मान–अवार्ड पाएँ, त्यसको तथ्यांक नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो घरको मूल्यभन्दा धेरै मूल्यका सम्पत्ति छन् यहाँ । यी प्रमाणपत्र, अवार्ड र सम्मान पत्रको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा मलाई मात्रै थाहा छ ।’
वरिष्ठ कलाकार निरले जीवनभर पाएका अवार्डले अफिसका टेबल, भित्ता भरिएका छन् । उनी थप्छन्, ‘एउटा कोठामा भरिएका यी प्रमाणपत्रले मेरा सन्ततिलाई भविष्यमा काम गर्न ठूलो ऊर्जा मिल्ने अपेक्षा गरेको छु । त्यसैका लागि छुट्टै कोठा बनाएको हुँ ।’
अभिनयमा पोख्त अभिनेता निर ७५ वर्षभन्दा धेरैका भए । तर जोस–जाँगर कुनै नयाँ कलाकारभन्दा कम छैन । उनको अभिनय नहेर्ने नेपाली चलचित्रका दर्शक सायदै होलान् । धेरैजसो बुवाको भूमिकामा काम गर्ने निर सकारात्मक पात्रमा सुहाउने गर्छन् ।
उनले हालै चलचित्र ‘परदेशी २’को काम सकाएका छन् । पोइ पर्‍यो बुढा ओके छ त, छक्कापञ्जा सिरिज लगायत केही चलचित्रसँग सम्झौता गरेका छन् । अरु केही ‘प्रोजेक्ट’ अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘जीवनभर चलचित्रबाहेक अरु केही काम गरिएन । स्वास फेर्दासम्म चलचित्रमा काम गरौं भन्ने लाग्छ । त्यसैले अल्छी भन्ने फिटिक्कै लाग्दैन ।’
बुलन्द अभिनयका कारण निरले नेपालका अधिकांश अवार्ड हात पारेका छन् । विभिन्न सरकारी सम्मान पाएका छन् ।
अभिनेता तथा निर्देशक शाहले २०२७ सालदेखि चलचित्र यात्रा थालनी गरेका हुन् । त्यो हिसाबले पनि उनी चलचित्र उद्योगमा लागेको ५० वर्ष पूरा भएको छ । कलाकारितामार्फत धेरैले निरलाई चिन्छन् । तर उनको परिचय लेखन र निर्देशनमा पनि राम्रै छ । चलचित्र उद्योगमा लागेका अधिकांशले निरलाई सबैभन्दा अग्रज चलचित्रकर्मीको रूपमा लिन्छन् । उनलाई ‘भिष्म पितामह’को रूपमा पनि परिचय दिइन्छ । निरको डेब्यु चलचित्र ‘परिवर्तन’ हो । २०४१ सालमा चलचित्र ‘वासुदेव’को निर्देशन गरे । त्यसपछि उनले आधा दर्जन चलचित्रको निर्देशन समेत गरेका छन् ।
निरले डेढ सयको हाराहारी चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । उनी निर्देशित पछिल्लो सिनेमा ‘सेतो बाघ’ २०७१ सालमा प्रर्दशन भएको हो । निरलाई अझै केही चलचित्र निर्देशन गर्ने सोच छ । ‘त्यो मौका जुरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हेर्नोस्, चलचित्र निर्देशन भन्ने कुरा सामान्य विषय होइन । निर्देशकको सानो गल्तीले ठूलो प्रोजेक्ट धरापमा पर्न सक्छ, एउटा पाइलटले सयौं यात्रुलाई उडाएजस्तो ।’
त्यसो त निर नेपाल टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । त्यसबाहेक उनले चलचित्र विकास बोर्ड जस्ता दर्जनौं संघसंस्थाको उपल्लो पदमा रहेर काम गरेका छन् ।
निर शाह आजभोलि स्वास्थ्यलाई लिएर निकै गम्भीर छन् । खानपानमा ध्यान निकै ध्यान दिन्छन् । खान नहुने कुरा जाँड, रक्सी चुरोट छाडिसकेका छन् । चिल्लो, पिरो, चर्को खानपान उनलाई मन पर्दैन । शाहलाई केही पटक ‘हर्ट अट्याक’ भयो । त्यसले उनलाई धेरै गम्भीर बनायो ।
‘एकपटक त म अस्पताल पुग्न २५ मिनेट मात्रै ढिला भएको भए मर्ने थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि २ पटक अट्याक भयो ।’ उनले आजभोलि बाबा रामदेवको योग–ध्यान पनि निरन्तर गर्ने गरेका छन् ।
निर भन्छन्, ‘स्वास्थ्यलाई लिएर हेलचक्र्याइँ गरियो भने दुःख पाइन्छ । सोही कारण निकै सजग छु, आजभोलि ।’
पहिलैदेखि धुम्रपान गर्ने बानी थियो उनको । शाहले ‘सेतो बाघ’ निर्माणको समयमा अत्यधिक धुम्रपान गरेकाले ‘हर्ट अट्याक’ समस्या देखिएको अनुभव गरे । सोही कारण उनी मुटुमा कतै सानो चस्को पर्दा पनि तुरुन्तै अस्पताल पुगेर जाँच गराउँछन् । ‘हर्ट अट्याक शत्रुलाई पनि नहोस् । यसको पीडा निकै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समस्याबाट टाढा रहने भनेको स्वयं उही व्यक्तिमा भर पर्छ ।’
त्यसो त शाह अन्य विभिन्न समस्याबाट पनि अछुतो रहेनन् । उनले २०१० सालको जन्मदिनको दिन सिम्लामा हुँदा पुनर्जन्म नै पाएका थिए । ठूलो सडक दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल भएका उनी भन्छन्, ‘त्यो दिनको याद गर्दा अहिले पनि निद्राबाट ब्यूझन्छु ।’
निर शाह चलचित्र उद्योगलाई लिएर निकै चिन्तित छन् । ‘बिस्तारै चलचित्र उद्योग अघि बढ्दै थियो, एकाएक कोरोना महामारी देखियो,’ निरले चिन्तित हुँदै भने, ‘एकाएक चलचित्र उद्योगीलाई नराम्रोसँग असर पार्‍यो । यसले अघि बढ्दै गरेको चलचित्रलाई पछि धकेलेको छ । तर बिस्तारै अघि ल्याउन हामीहरू नै तात्नुपर्ने हुन्छ ।’
कोरोनापछि चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान गराउन र पुरानै लयमा फर्काउन सरकारी तवरबाट पनि सहयोग हुनुपर्ने उनको तर्क छ । निर चलचित्र विकास बोर्डप्रति पहिल्यैदेखि रुष्ट छन् । उनले धेरैपटक चलचित्र विकास बोर्डको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् । कतिपटक त उनले बोर्ड खारेजीको माग समेत गर्दै आएका छन् ।
‘कोरोनापछि समग्र नेपाली चलचित्रबारे बोर्डले के गर्दैछ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘मैले धेरै केही बोल्नु छैन । बोर्डले चलचित्र उद्योगभित्रको विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने हो । तर खासै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको देखिएन ।’
निर समग्र नेपालको विकासक्रम, भ्रष्टाचार, राजनीतिक खिचातानीका कारण वाक्क छन् । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकाएक संसद विघटन गरेपछि उनी झन् रुष्ट छन् । ‘हरे शिव यो के गरेको ?’ प्रधानमन्त्रीसँग रिसाउँदै निरले भने, ‘संविधानमा नभएको कुरा ल्याएर एकाएक संसद विघटन गर्ने ? जनताले स्थिर सरकार चाहेर बहुमत दिएका होइनन् ?’
प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा पनि यस्तो स्थिति आएको उनको टिप्पणी छ । ‘समग्र देशमा कुन नेतृत्व भरपर्दो देखियो ? वास्तवमा नेपालीहरूले गर्वका साथ छाती फुलाएर यो मेरो नेता भन्न लायक कोही छ जस्तो लागेन, स्वयं नेताहरूका कारण । हामी कति अभागी एउटा नेताको फोटो घरमा सजाउन अझै पाएनौं,’ निरले दुःखी हुँदै भने, ‘पटक–पटक नेताहरूका कारण जनता आजित बनेका छन्, म आजित बनेको छु । समग्र युवा आजित बनेर पलायन भइरहेका छन्, खै कसले बुझ्छ यो कुरा ?’
विवाह बन्धनमा बाँधिदै टिभिकी ‘नागिन’ मौनी रोय, क...
अमिताभ बच्चनले धोएका थिए करीना कपूरको गोडा, आखिर...